WARBIXIN: Miyaa lagu kala guuleystay Siyaasadii Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya? – Puntlandtimes
WARBIXIN: Miyaa lagu kala guuleystay Siyaasadii Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya?
April 3, 2019 W LAASCAANO
JIGJIGA(P-TIMES)- Tartan adag oo siyaasadeed qaatayna in ka badan 5 bilood ayaa galabtay lagu soo gaba-gabeeyey magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida, waxaana dhammaadkeeda joogay Ra’iisulwasaaraha dalka Itoobiya Dr Abiy Ahmed, si uu goobjooge uga noqdo dhameystirka heshiis uu horey labada dhinacba ugu dhexdhexaadiyey.
Labadii kooxood ee isku hayay gudaha Xisbiga dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa u muuqda in ay hadda kala raaceen ujeedooyinka deegaanka, oo ay qaateen in qolo kastaa qaadato wixii ay ku qanacsan tahay.
Cidda ugu badan ee is haysatay ayaa ahaa Madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar oo hogaaminaya kooxda Dhiiga cusub ee doonaysa Isbedelada dalka Itoobiya in ay saameyn xoog badan ku yeeshaan xubnaha Xisbiga, taladiisana dib loo eego.
Iyo kooxdii ka hartay maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar oo hadda Xabsiga ku jira, waxaana hogaaminaya Wasiirka Maaliyadda ee Itoobiya Axmed Shide, horeyna u ahaa Gudoomiyaha KMG ah ee Xisbiga, waxaana la gaaray meeshii ugu adkeyd.
Labada kooxood ayaa dhinac kasta dhinaca kale mariyey tijaabooyin adag oo siyaasadeed, balse ma jirto cid ku guuleystay damaceeda, marka laga reebo kooxda Dhiiga cusub oo uu caawiyey Isbedelka dalka Itoobiya ka hana-qaaday kuwaas oo shalay dhulka dhigay Astaamihii Xisbiga oo ay ku bedeleen kuwa muujinaya Soomaali-nimada
Sidaas oo kale Magaca Xisbiga ayay ergadu u codeeyeen in laga reebo kalmada E-da loo yaqaano, taas oo ka dhignayd Itoobiya, sidaas oo kale heesta, Calanka, Astaanta Xisbiga ayaa loo ekeysiiyey Astaamaha Soomaalida, taas oo ka dhigan in daaqada laga saaray kuwii ay keenen Xisbigii talada Itoobiya mudada gacanta ku hayey ee EPDRF iyo TPLF.
Kooxda uu hogaaminayo Axmed Shide, waxay adkeysatay jagada Gudoomiyaha Xisbiga ahna Wasiirka Maaliyadda ee Heer Faderaal, taas oo ka dhigan in ay si adag u difaacdeen jagadaas oo ay dadaal badan galinayeen, sidii ay u heli lahaayeen.
Madaxweyne Mustafa Cumar iyo kooxdiisa ayaa qaatay jagooyin kala ah Madaxweynaha, Gudoomiye kuxigeenka Xisbiga, Madaxweyne kuxigeen, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in ay ka tanaasuleen damacoodii ku aadanaa doonista jagada Gudoomiyaha xisbiga oo ay muhiim u arkayeen.
Falanqeeyaasha siyaasadda gobalka Soomaalida ayaa sheegaya in ay ka dhigan tahay arrintan in ay dhacday in qolo kasta dhankeeda u jeedato siyaasadeed, oo meel dhexe ay iskugu yimaadeen, mana jirto cid gaartay guul dhameystiran marka laga reebo kooxda Madaxweyne Mustafa Cumar oo helay waxyaabo badan oo aysan horey u heysanin.